कम्मर दुख्ने, अनुहारको दाग, कालो पोतो हटाउने अचुक ओखती हो कालो तिल, यसरी प्रयोग गर्नुहोस ! – Ramailo Sandesh
कालो तिल अथवा तिलबाट प्राप्त हुने बिऊ तेल उत्पादनको लागि हामीले प्रयोग गर्ने गछौँ । अनुहारमा चायाँ,कालो पोतो वा दाग, कालो घब्वा आदि आएमा त्यस दाग निको पार्न सकिन्छ । साथै कम्मर दुख्ने रोगलाई पनि निको पर्न सकिन्छ। उपायहरुलाई नियमित प्रयोग गर्नु भयो भने छिटो दाग जान्छ
आधा पाउ भुटेको कालो तिल, १० ग्राम घोडताप्रे, १० ग्राम धूलो मरिच, १० ग्राम सूठो धूलो, १० ग्राम धूलो पिप्ला, ५ ग्राम फुराएको हिङको धूलो सबै मिसाएर सिसीमा राख्ने र दुख्न सुरु भएपछि ३ पटक धूलोलाई मिश्री पानीमा पकाएर खाँदा कम्मर दुख्ने रोग निको हुँदै जाने छ ।मुखमा पोतो वा दाग आएमाजीरा, बोके जीरा, कालो तिल, सरस्यूँ र रायो सबैको चूर्ण बराबर मिसाएर दूधमा फिटेर बेलुका सुत्ने बेलामा नित्य पोतो वा दागमा लगाउनाले ठीक हुँदै जाने छ ।
अण्डा खाएपछि भुलेर पनि नखानुहोस यी दुई चिज, जानीराखौ!
उमालेको अण्डा खादा हुने धेरै फाइदाहरूको बारेमा तपाईलाई पनि थाहा होला। जो मान्छे नियमित रुपमा जिम जाने गर्छ र जसलाई बडी बिल्डिंगको क्रेज हुन्छ ति मान्छेले आफ्नो शरीरलाई बलियो र स्वस्थ राख्नको लागि नियमित रुपमा अण्डाको सेवन गर्ने गर्छन।
अण्डा खादा शरीर बलियो मात्र नभई यसबाट शरीरमा स्फूर्ति पनि बनिरहन्छ। तर यदी तपाई दैनिक अण्डा खाने गर्नुहुन्छ भने यसको लागि तपाईले केहि कुराको ध्यान दिन निकै जरुरि हुने गर्छ । धेरैपटक हामि खानेकुरासंग जोडिएको धेरै चिजलाई वास्ता गर्दैनौ। आज हामी तपाईलाई यस्तै दुई चिजको बारेमा बताउछौ, जुन जुरा अण्डा खादा भुलेर पनि खान हुदैन।
कागती: प्राय: यस्तो हुने गर्छ कि जो मानिसलाई खान अण्डा मनपर्छ, उनले अण्डामा कागती निचोरेर खाने गर्छन, जसलेअण्डाको टेस्ट मिठो बनाउछ। तर एस्तो गल्ति कहिल्यै पनि नगर्नुहोस। किनकि यस्तो गर्दा रक्तनलीलाई असर पुग्नसक्छ। जसकारण हृदयघातको ख-तरा हुन सक्छ।
केरा: जसलाई डाइटसंग सम्बन्धित जानकारी हुदैन, उसले यो कुराको ध्यान राख्नुपर्छ कि अण्डा खानसाथ केरा खानु हुदैन। यसबाट पेटसंग सम्बन्धित धेरै समस्या हुने गर्छ। जसबाट कब्जियत, ग्यास्ट्रिक र आन्द्रासंग सम्बन्धित समस्या निम्त्याउछ। त्यसैले अण्डा खाएपछि भुलेर पनि केरा खानु हुदैन।